ဂျုံ ကြက်သားလိပ် Easy cook | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ဂျုံ ကြက်သားလိပ် Easy cook
ဂျုံ ကြက်သားလိပ် Easy cook
Posted by weiwei on Nov 27, 2011 in Food, Drink & Recipes | 22 comments
Uzebak style wei's cook
ဒီကနေ့ချက်ပြထားတဲ့ အစားအစာက မနက်စာအဖြစ်စားသုံးဖို့ အဆင်ပြေပါတယ် … ညဘက်ကထဲက ဂျုံနဲ့နွားနို့ရောပြီး ဂျုံအပြားကို လုပ်ထားရပါတယ် … ကြက်သားခါးပတ်လဲ တစ်ခါထဲချက်ထားပြီး မနက်အိပ်ယာထတော့မှ လိပ်စားလိုက်ရုံပါပဲ … UZebak သူငယ်ချင်းကောင်မလေး လုပ်ကျွေးလေ့ရှိတဲ့ အစားအစာတစ်ခုကို အမှတ်တရပြန်လုပ်ပြီး လုပ်နည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် … လုပ်နေကျမဟုတ်လို့ မလှမပဖြစ်နေတာလေးတော့ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ ….
ဂျုံမှုန့် …… အနည်းငယ်
နွားနို့ …… ၂၅၀ မီလီလီတာတစ်ဗူး
သကြား၊ ဆား … သင့်တော်သလောက်
ဂျုံအပြားပြုလုပ်ရန်အတွက် ဇလုံတစ်ခုထဲတွင် ဂျုံမှုန့်၊ နွားနို့၊ သကြား၊ ဆားနဲ့ ရေအနည်းငယ်ထပ်ထည့်ပြီး မပြစ်မကျဲအနေအထားရအောင် ဖျော်ထားရပါတယ်။ ထို့နောက် မကပ်တဲ့ အိုးကို မပူပေးပြီး ထောပတ် (သို့မဟုတ်) ဆီ သုတ်တယ်ဆိုရုံလေး သုတ်လိမ်းရပါမယ် … အိုးပူချိန်မှာ မုန့်နှစ်ရည်ထည့်ပြီး ခပ်ပါးပါးလေးဖြစ်အောင် လုပ်ရပါမယ်။ ပူလာချိန်မှာ မုန့်ကနဲနဲကြွလာမယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အနားကနေခွာပြီး ရှေ့နောက်လှန်ပေးပြီးရင် ရပါပြီ။
လုပ်ပြီးသားမုန့်အချပ်တွေကို ကြွပ်ကြွပ်အိပ်ထဲထည့်ထားပြီး သိမ်းထားရုံပါပဲ ..
ကြက်သားခါးပါတ်အတွက် ကြက်သားကိုစဉ်းကောလုပ်ထားပြီးဆားနဲ့နယ်ထားမယ် … ကြက်သွန်ဖြူနီ ဆီသတ်ပြီး ကြက်သားထည့်၊ ကျက်ခါနီးရင် မဆလာထည့်ပြီးရင် ရပါပြီ … တစ်ခါတစ်လေ လူများများနဲ့စားချင်တဲ့အခါမှာတော့ အာလူးကိုပါ သေးသေးလေးတွေတုံးပြီးထည့်ချက်လို့ရပါတယ်…
လိပ်တာကတော့ ကော်ပြန့်လိပ်သလိုပဲ အသားကိုအလယ်မှာထည့်ပြီး လိပ်လိုက်ရုံပဲ …
အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ပစ္စည်းများကိုသာအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် အရသာလည်းရှိ စားလို့လဲကောင်းပြီး လုပ်ရတာလဲ လွယ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးရင်း …
မနက်စောစော ဗိုက်စာတာနဲ့ အတော်ပဲ ပုံလေးကြည့်ပြီး အားပေတော့မယ် ဆိုင်ဖွင့်မှ တကယ်လာအားပေးမယ်…:P:P
ဟင့်အင်း ဂျုံဝက်သားဆိတ် လုပ်နည်းပဲ သိချင်ဒယ်။။။။
မိန်းမ ကို လုပ်ကျွေးခိုင်းဖို့ 
အော်. ….ဘုတ်မာခ့်လုပ်ထားပါသည် နောက်တပါတ်
လို့ မန့်မလို့ ရှိသေး….
မယုံဘူး စားကြည့်ရမှယုံမယ် နောက်တာ
Uzbek နဲ့ Turkey အစားအစာတွေကဆီလည်းနဲတယ်
မနက်က ပုံထဲမှာပါတဲ့ ငါးခုကို တစ်ယောက်ထဲစားလိုက်ပြီး နေ့လည်စာပါ လွတ်သွားတယ် …
တကယ်လုပ်ရင်တော့ တစ်ခါထဲနဲ့ အဆင်ပြေဖို့ သိပ်မလွယ်ဘူး … ဂျုံအပြားလုပ်ရတာ အရည် အပြစ်အကျဲက တော်တော်အရေးကြီးပါတယ် …
ဒီတစ်ခါဖက်ထုပ်လုပ်စားရင် မမဝေဆီပို့ပေးမယ် (မေးလ်နဲ့)
စောစော က သိရင် လ္ဘက်ရည်ဆိုင် မှာ လုပ်ရောင်းတယ် ။ အခုတော့ ဆိုင်ပြုတ်သွားပြီ ။ ကိုယ် ဟာ့ကိုယ်အိမ် မှာ လုပ်စားတော့မယ်။
အီတာလျံ တိုက်စစ်မှူးဂီဂီလည်း အားကျမခံ
pepperoni pizza လုပ်စားနည်းကို ရှဲလိုက်ပါသည်
၂) နီးစပ်ရာ　hanamasa ဆိုင်သို့သွားပါ
၃) ပီဇာခြောက် (ယန်း၄၀၀တန်ခန့်) ကိုဝယ်ပါ
၅) ပီဇာဗူးကို ကျောဘက်လှန်ပါ…အညွှန်းဖတ်ပါ ထို့နောက်အခွံချွတ်ပါ
၆) ကျောတွင်ရေးထားသည့် မိနစ်အတိုင်း မိုက်ခလိုဝေ့ဖ် ထဲသို့ ထည့် အပူပေးပါ
၇) ပန်းကန်ပြားနှင့် ဇွန်းခက်ရင်းကိုပြင်ဆင်ထားပါ
၈) အလွန်အရသာရှိသော pepperoni pizza ကို သုံးဆောင်နိုင်ပီ ဖြစ်ပါသည်….
:D:D:D ဟီဟီ …ဂီဂီ
၅ ခု တောင်စားနိင်ပါလား နွားနို့လဲ တစ်ခွက်ပါသေး .. ခန့်မှန်းကြည့်မယ် မမဝေပုံ တော်တော်ဝမှာပဲနော်..ဟီးးးးး
…ဘယ်နားလေး ဘာရှိ လိုက်ရှာဝယ်စား….
ကိုယ်တိုင်စား အားမရလို့ ….အပေါင်းအသင်းတွေ့ လက်တို့ …..ဒါက ဒုတိယအဆင့်
အဲ့ သည်အဆင့်ပြီး နောက်တဆင့် ကိုယ်တိုင် ဒုက္ခခံ ချက်ပြုတ်စား……
နီးစပ်ရာ ကျွေး ပေါ့လေ…
ယခုကိစ္စမှာကား .. အပြင်မှာ လူအချင်းချင်းလက်တို့တာ အားမရလို့ …
ဒါ့ပုံဒွေဘာတွေရိုက်ပီး အွန်လိုင်းက ရှဲတဲ့ အဆင့်မို့
မမဝေဟာ ကျိန်းသေ၀တယ်လို့ ကျုပ်တော့ ကောက်ချက်ဆွဲ သဗျ….
(ခင်လို့ စတာပါ မမဝေခင်ညား …စေဒနာကိုစော်ကားတာ မဟုတ်ရပါဗျား)
အစားအသောက်ထူးဆန်းတာတွေကို ချက်ကြည့်ဖို့နဲ့ စားကြည့်ဖို့ ၀ါသနာပါတာတော့ မှန်ပါတယ် ဂီဂီရေ ..
စားဖို့ထက် သူများကိုကျွေးဖို့ ပိုပြီးဝါသနာပါပါတယ် …
ဒီနေ့တစ်ယောက်ထဲမို့ ကျွေးရမယ့်သူမရှိလို့သာ အကုန်စားလိုက်ရပါကြောင်း …
ဟင် ဘယ်မှာလဲ ဘယ်မှာလဲ …??
ပြပြ ..ကိုအင်ဂျီးကို ပြ ….
ဝမဝတော့ မသိဘူး။ မေ့တတ်တဲ့ ချာတိတ်တယောက် အန်တီဝေတို့ရုံးမှာ အလုပ်သွားလျောက်မလို့ အသိရှိရင်ပြောပါဆိုလို့ အန်တီဝေဆီကို မိတ်ဆက်စာရေးလိုက်တယ်။ လူမှားမှာစိုးလို့ ဖုံးဆက်လိုက်တော့ ကျမ ခေါင်းမှာ ပန်းတွေအများကြီး ပန်ထားပါတယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း မင်းနာမည်ခေါ်ဖို့ မေ့နေရင် သူကိုမြင်တာနဲ့ ပြန်အမှတ်ရလာမယ် ပြောလိုက်တယ်။ ကောင်လေးလည်း ထင်တဲ့အတိုင်း နာမည်မေ့နေတာနဲ့ အန်တီဝေ့ကို ကြည့်လိုက်ပြီး ဝမ်းသာအားရနဲ့ အားကိုးတကြီး ခေါ်လိုက်ပုံက “အန်တီဝဝ” တဲ့။ အတော်ဆိုးတဲ့ကောင်၊ အန်တီဝေက ပေါင်နှစ်ရာကျော်ရုံလေးပဲရှိတာ၊ မနည်းတောင်းပန်ယူရတယ်။
၀လားမ၀လားဆို .. သူများတွေ မိသားစု ၅ ယောက်လောက်နေတဲ့တိုက်ခန်းမှာ ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲပဲနေရတယ် … ကင်းဆိုဒ် ၂ ယောက်အိပ်ကုတင်တောင်မှ တစ်ယောက်ထဲပဲ အိပ်လို့ဆံ့တယ် … ဆက်တီခုံကလဲ ၃ ယောက်ထိုင်ခုံကို တစ်ယောက်ထဲထိုင်ရတယ်လေ … ထမင်းစားပွဲလဲ အတူတူပဲ … ထမင်းပေါင်းအိုးကလဲ တပြည်အိုးနဲ့တည်ရတာ ….
ကြည့်ရတာနဲ့တင် သွားရေယိုလာပြီ။ ခါတော်မှီ ပိတ်ရက်မို့ ချက်ခြင်းပစ္စည်းပြေးဝယ်ရတယ်။ လုပ်စားကြည့်ဦးမယ်။ နောက်တခါဆိုင်ဖွင့်ပွဲလုပ်ရင် တောင်းဆိုရမယ့် မုန့်ကို ကြိုတင် တေး ထားလိုက်ပြီ။
ခုတလော ရွာထဲမှာ ချက်နည်းပြုတ်နည်းတွေ မတင်တာကြာပြီလို့ စဉ်းစားနေတုန်း ရှိသေးတယ် ဝေဝေ မနောရနေတာများလား
တာဝန်မကျေဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားမိလို့ မနေ့က ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ထားတာပါ .. လက်ချောင်းတွေတောင် အပူလောင်ခံလိုက်ရတယ် …. ကုလားမတွေကတော့ လုပ်နေကျမို့ လှလှပပလေးတွေကို လက်နဲ့ပဲ လုပ်လိုက်ကြတာ လွယ်လွယ်လေးလိုပဲ … ကျွန်မတကယ်လုပ်ကြည့်တော့ မြင်သလောက်မလွယ်တာတွေ့ရတယ် … ဒါပေမယ့် အခုလိုအားပေးကြတာတွေ့တော့ ပျော်ပါတယ် .. လုပ်ရကျိုးနပ်တာပေါ့နော် …
စားဖူးရင် အရသာ ကောင်းကြောင်း ညွန်းပေးချင်ပါတယ် အခုတော့ မြင်သာမြင်ရ မစားရတော့လည်း ကောင်းတဲ့ အကြောင်း မကြော်ညာနိုင်ဘူးပေါ့လို့…
ကျနော်တို့ ဘက်မှာတော့ ငါးဖယ်လိပ်ဆိုတာရှိသဗျ၊ ငါးဖယ်နဲ့ ဘဲဥ ကိုတထပ်ခြင်းလိပ်ထားတဲ့ပုံစံပါ၊ ထိပ်ကကြည့်လိုက်ရင် ကိတ်လိပ်လိုပဲ စားလိုက်ရင်တော်တောအရသာရှိတယ်။ လူကြီး(အသက်ကြီးကြီးမကြီးကြီး) တွေ လာရင် ဧည့်ခံတဲ့အစားအစာထဲပါတယ်။
ဟဟ စားလို.ကောင်းမဲ့ပုံပဲ အီလဲအီမယ်ထင်တယ်နော် မမဝေ..
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရင် စားရတယ်ကို မရှိဘူး.. ရွာထဲမှာမုန်.လုပ်နည်း အကုန်ကူးပြီး လိုက်လုပ်တာ… တနင်္ဂနွေနေ.ဆို နားတောင်မနားရဘူး အခုထိကို အောင်အောင်မြင်မြင် မစားရသေးဘူး..
မမဝေ သာလုပ်ကျွေးပေးတော့ ဟေဟေ…